Fitaovana plastika, bobongolo plastika, tsindrona plastika - Chapman
Tongasoa eto amin'ny orinasa Chapman Maker, natsangana tamin'ny taona 2008. Manana fanamarinana SGS sy rafitra fitantanana kalitao ISO 9001 izahay.
Mifantoka amin'ny fampandrosoana ny famolavolana plastika izahay; Fanamboarana rindrina manify sy matevina, famolavolana fandeferana henjana, famolavolana LSR, fampandrosoana vaovao sy fivoriambe. Manolotra tsena maromaro isika ao anatin'izany ny Indostria, Automotive, Medical, Electronics, Defense, Transport ary Consumer. Mihoatra lavitra ny zavatra andrasan'ny mpanjifanay amin'ny alàlan'ny fanomezana hery ny mpiara-miasa rehetra ary ny famoronana kolontsaina izay misy ny fanatsarana, ny famokarana mahia ary ny fiaraha-miasa amin'ny famatsiana mba hanomezana lanja ny mpanjifanay.
5-30 Andro Fe-potoana
300-500K Volana Fahaiza-tsindrona
35-50 Sets / Volana Fahafahana bobongolo
Lasitra plastika sy tsindrona
Ny fotodrafitrasa fanaovan-tsolika dia manolotra fahalalahana amin'ny fampandehanana ny karazana fitaovana thermoplastic. Manokana izahay amin'ny famokarana vokatra ho an'ny fampiharana marobe ary koa ho an'ny indostria manokana ao anatin'izany ny fitsaboana, fitaovana elektronika, mpampitohy, indostrialy, fiarovana, fitaterana ary mpanjifa.
Miaraka amin'ny zavamaniry efatra sy tsindrona 50 + manomboka amin'ny 60 ka hatramin'ny 500 taonina, dia afaka manamboatra singa bitika hatramin'ny .75 ons ka hatramin'ny vala lehibe tahaka ny 80 grama (5 lbs). Afaka manampy anao amin'ny fanatsarana sy fanatsarana ny volavolam-bokatrao izahay hahatratrarana ny valiny mety indrindra mifanaraka amin'ny takian'ny singa.
Famokarana miharo volo
Fananganana rindrina matevina sy manify
Handravaka sy fitiliana
Hihaona amin'ny anao rehetra
Ny asa ambaratonga faharoa ataonay dia manala ireo mpivarotra ivelany, mitahiry fotoana firy sy vidiny lehibe ho an'ny vokatrao rehetra.
Fiasa faharoa ao an-trano:
Fandraisana anjara: Firaisana miraikitra, fametahana hafanana
Fanontana pirinty sy haingon-trano
Fivoriambe mekanika & elektrika-mekanika ary fitsapana